DOMFI :: Support Ticket System
• Time of operation – Monday through Friday 8:00AM – 5:00PM.
• Type of request – Feedback, General Inquiry, Reportaproblem, Reportaproblem/Access Issues, Request
• Remote access – IT staffs may utilize software to check such as Anydesk.
DO Microfinance မှဝန်ထမ်းများအားလုံး Computer, Printer နှင့် Morakot System များဖြင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာ အကူအညီများအား IT Officer များအား အကူအညီတောင်ယူရာတွင် ယခု IT Helpdesk Portal မှသာတောင်းယူပေးပါ။ အကူအညီ တောင်းခံရာတွင် တွေကြုံနေရသော အခက်အခဲများအား Screenshot များဖြင့်တကွ ပူးတွဲတင်ပြပေးပါ။
အကူအညီတောင်းယူသော အချိန်သည် ရုံးဆင်းချိန်ဖြင့် နီးကပ်နေပါက (သို့) ရုံးပိတ်ရက် နှင့်တိုက်ဆိုင်ပါက နောက်ရက်များတွင်သာ အကူအညီပေးပါလိမ့်မည်။ အကူအညီတောင်းထားသော Tickets များအား မိမိအခက်အခဲများ ပြေလည်သွားပါက၊ Tickets ပိတ်နိူင်ရန် အကြောင်းပြန် ပေးရပါမည်။ ရုံးဖွင့်ရက် နှစ်ရက်ဆက်တိုက် အကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိသော Tickets များကို အလိုလျှောက်ပိတ်သိမ်းပါမည်။
DO MFI IT Team
Copyright © 2022 DOMFI :: Support Ticket System - All rights reserved.